Iswiidhen ma looga baahan yahay xusidda maalinta caalamiga haweenka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Fredrik Sandberg SCANPIX
Iswiidhen ma looga baahan yahay xusidda maalinta caalamiga haweenka
Halgankii weli lagama guul gaarin waa in halkiisa laga sii wado
La daabacay fredag 8 mars 2013 kl 14.16
Siddeeda bisha maarso oo ku aadan maanta oo jimce ah ayaa sannad walba looga xafladeeyaa caalamka, middaasoona lagu xuso maalinta caalamiga ah ee haweenka. Maryan Cumar, waxay ka mid tahay haweenka soomaaliyeed oo ku dhaqan dalkan Iswiidhen magaalada Uppsala. Ereyadaa ayay Maryan Cumar ku xustay gabay ay ku tirisay afka iswiidhishka ayna ugu talo-gashay xuska maalinta haweenka, sida ay noo sheegtay mar aannu khadka telefoonka kula xiriirney.
Waa maxay haddaba maalinta 8-da maarso? Maxaa maalinta lagu doortay, sidee ayayse ku bilaabatay? Waa taariikh dheer inaannu halkan ku soo goobno, waa taariikh ka soo jeedda bilowgii qarnigii labaatanaad 1910 oo markii ugu horeeysay la go'aansaday in 8-da maarso noqoto maalinta caalamiga ee haweenka.
Dhanka kale dalkan Iswiidhen ayaa leh taariikh soo jireen ah ee la xiriira u halganka xuquuqda haweenka. Halka uu sidoo kale ururka haweenka ka taariikh dheer yahay ururka shaqaalaha ee sooshiyaalka. Sannadkii 1866 ayay markii ugu horeeysay ey magaalada Lund is qaban qaabiyeen haweenka shaqaalaha ee dalkan Iswiidhen. Iyadoona sannadihii1887-88 markii ugu horeeysay la aasaasay urur dhab ah ee shaqaalaha haweenka harqaanleeyda iyo kuwa dharka dhaqa. Kuwaasina oo markii ugu horeeysay sameeyey shaqa ka fariisi sannadkii 1890.
Wixii intaa ka dambeeyay ayuu is-bedel ballaaran ka dhacay dalka, hadday noqon lahayd dhanka xuquuqda haweenka iyo hadday noqon lahayd is-bedelka bulshada ku dhacay oo ey soo galeen qoowmiyado kala duwan. Ma loo baahan yahay haddaba xuska maalintan, maadaama la yiraahdo in dalkani uu ka mid yahay waddammada ugu sita ee wax ka qabtay howlaha la xiriira dhanka sinnaanta? Su'aashaa ayaan haddaba wax ka weeydiiney qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Iswiidhen. Sahra Barkhadle, Boosteeya Yuusuf iyo Maryan Cumar oo ku kala dhaqan magaalooyinka Istockholm iyo Uppsala. Waa kuwan jawaabihii ey middaa ka bixiyeen sida ey u kala horeeyaan: